Bisikileta - Tour De Mada : Nianjera nefa mbola voalohany I Lanto Bulldozer
Dingana faharoa azon’I Lantonirina Manjakafy na Lanto Bulldozer teo amin’ny fihodinana am-bisikileta an’I Madagasikara ny 90 km manodidina an’I Morondava, omaly.
Tamin’ny alalan’ny fe-potoana 2 ora 27’40” no namitany an’ity lalana mihodidina ity. Niara-niditra taminy teo am-pahatongavana anefa I Mederic Clain sy Cedric Gasnier noho ny fianjerana nanjo azy teo amin’ny fihodinana faha-21, izay efa nahatraran’izy mirahalahy frantsay azy, ka nahatonga izany fiarahana miditra izany. Na izany aza anefa dia mbola tsy nampiova ny laharana voalohany sy faharoa eo amin’ny filaharana ankapobeny.
“Efa miha manakaiky ny fe-potoana eo amiko sy Alexis Tourtelot, laharana faharoa. Heveriko fa miha manakaiky toy izany ihany koa ny fiverenan’ny akanjoba mavo aty amiko. Iny fianjerana iny no isan’ny olana tsy nahatonga izany teto”, hoy I Lanto Bulldozer , ao amin’ny ekipam-pirenena B, izay iarahany amin’I Emile Randrianantenaina, tompon’ny amboara farany teo amin’ity fihodinana am-bisikileta an’I Madagasikara ity.
Eo amin’ny laharana fahatelo no misy an’I Lantonirina Manjakazafy raha fahefatra izy talohan’io andiany fahenina tany Morondava omaly io.
“Efa toerana nanaovako fanazarantena matetika I Morondava, ka tsy nanavao ahy intsony ny fihazakazahana aminy”, hoy ihany I Lanto Bulldozer tamin-kafaliana.
Ho an’ny anio dia halavirana 111 km mampitohy an’I Malaimbandy amin’I Miandrivazo, izay toerana anjakan’ny fiakarana, no hanamarika ny dingana fahafito. Efa toerana fanaovan’I Lantonirina fanazarantena ihany koa izany saingy miankina amin’ny fomba hoentina manatanteraka ny hazakazaka no mety hiakarany amin’ny filaharana hatrany na tsia. Isan’ireo mpihakazakazaka mety hanana herijika ihany koa I Emile randrianantenaina, izay mpiray ekipa amin’I Lantonirina Manjakazafy.